Lü Yingchun - Zhang Fan Otu - WRSP
1959 (October 8): Zhang Lidong mụrụ na Shijiazhuang, Hebei, China.
1975 (March 8): Lü Yingchun mụrụ na Yantai City, Shandong, China.
1984 (October 24): Zhang Fan, ada Zhang Lidong, mụrụ na Shijiazhuang, Hebei, China.
1990 (August 23): Zhang Qiaolian, onye hụrụ Zhang Lidong n'anya n'ọdịnihu, mụrụ na Shijiazhuang, Hebei, China.
1996 (March 1): Zhang Hang, ada Zhang Lidong, mụrụ na Shijiazhuang, Hebei, China.
1998: Lü Yingchun kwenyere na ya nọ n'ọnọdụ Bible nke "Nwa e bu ụzọ mụọ." O mechara ghọta na ọ pụtara na ọ bụ “Chineke n’onwe Ya.”
Early 2000s: Lü Yingchun duziri otu ọmụmụ ihe na Zhaoyuan. Ọ gbasakwara azịza ya maka ọbụbụ Messiah site na ịntanetị.
2001 (Septemba 12): A mụrụ Zhang Duo, nwa Zhang Lidong.
2002: Zhang Fan kwetara na Broadcastlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Mgbasa Ozi na Beijing (aha ya na 2004 dị ka Mahadum Nkwukọrịta nke China).
Mid-2000s: Zhang Fan, na ikekwe Lü Yingchun, gụọ akwụkwọ akpọrọ 七 雷 发声 (Olu asaa nke ụda olu) ndi dere akwukwo di na Baotou, Inner Mongolia: Li Youwang na Fan Bin.
2007: Zhang Fan guru akwukwo nke aha ya mechara cheta dika Chineke Ọrụ Zoro ezo (神 隐秘 的 做功), ikekwe ihe eji egwu ma ọ bụ iṅomi The Ọrụ Zoro ezo Chineke mere ya (神 隐秘 的 作工) nke Nzukọ nke Chineke Pụrụ Ime Ihe Nile bipụtara, mana ọ naghị enwe ike ịkpọtụrụ ụka ahụ.
2008 (October): Zhang Fan hụrụ ọrụ Lü Yingchun na andntanetị ma kpọtụrụ ya. O mechara leta ya na Zhaoyuan.
2009: Zhang Fan gbanwere nne ya, Chen Xiujuan, site na ya, nna ya Zhang Lidong, nwanne ya nwanyị Zhang Hang, na nwanne ya nwoke dị afọ asatọ Zhang Duo gaa otu Lü Yingchun.
Na ngwụcha 2009: Zhang Fan gbaziri 50,000 RMB n'aka nne ya iji kwado mmegharị nke ndị edemede nke Ebube asaa akwụkwọ, Li Youwang na Fan Bin, site na Baotou ruo Zhaoyuan, ebe ha malitere ibi na, na-akwado ya, ezinụlọ Zhang. Fan Longfeng ghọkwara akụkụ nke gburugburu ụlọ.
2010: Lü Yingchun malitere ibi na Zhang Fan.
2011: Zhang Fan kpọrọ Li Youwang "mmụọ ọjọọ" (邪灵), ya na nwunye ya hapụrụ ìgwè ahụ na Zhaoyuan wee kwaga Dongyin, Shandong. Achọpụtakwara Fan Longfeng dị ka "mmụọ ọjọọ" (邪灵) ma chụpụ ya.
2014 (na ma ọ bụ gburugburu May 20): Lü Yingchun na Zhang Fan kwupụtara na ha bụ Ndịàmà abụọ nke Akwụkwọ Mkpughe, ma bụrụkwa Chineke. Ha matakwara Chen Xiujuan, nne Zhang Fan, dika “ajọ mmụọ” (邪灵), ma chụpụ ya n'ụlọ ya na otu. Zhang Fan na Lü Yingchun kwere ka Zhang Lidong nabata n'ezinụlọ ya onye hụrụ ya n'anya, Zhang Qiaolian, ma kweta ya n'ime otu ha.
2014 (May 27): Zhang Fan na Zhang Lidong gburu nkịta ezinụlọ, Luyi, ihe omume ha weere dị oke mkpa.
2014 (May 28): Zhang Fan hiwere ma nyere ya aka, Zhang Lidong kụrụ Wu Shuoyan ka ọ nwụọ na nri nri McDonald na Zhaoyuan, Shandong, China. Ndị nọ ya bụ Lü Yingchun, Zhang Hang, Zhang Qiaolian, na Zhang Fan nwanne nwoke dị afọ iri na atọ, Zhang Duo.
2014 (May 29): Ndị uwe ojii China kwuru na ha achọtala ihe nke Churchka nke Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile n'ụlọ Zhang Lidong.
2014 (May 31): Vidiyo nke mkparịta ụka na Zhang Lidong bụ nke CCTV, telivishọn mba China.
2014 (June 1): Zhang Lidong na Zhang Fan gbara Phoenix Satellite TV gbara ajụjụ ọnụ.
2014 (August 21): Ikpe nke ndị a boro ebubo nke igbu mmadụ McDonald mere na Ụlọikpe Intermediate People na Yantai, Shandong.
2014 (October 11): Zhang Lidong na Zhang Fan mara ụlọ ikpe Yantai Intermediate People Court ikpe ọnwụ. A mara Lü Yingchun nga mkpụrụ ọka. A mara Zhang Hang mkpọrọ afọ iri na Zhang Qiaolian afọ asaa.
2015 (February 2): Egburu Zhang Lidong na Zhang Fan.
Lü Yingchun - Zhang Fan bụ otu obere ọrụ dị mkpirikpi; enwere nkọwa ole na ole na akụkọ ihe mere eme na mmepe (Introvigne 2017). Ejikọtawo otu a na Chọọchị nke Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile, ụka nke gọọmenti China kwadoro n'otu oge ahụ ka òtù Lü Yingchun - Zhang Fan pụta, ma ndị ọchịchị China ma ndị mgbasa ozi. Ebe ọ bụ na akụkọ akụkọ nke abụọ mmegharị ahụ gbakwunyere na njikọta ha na-ezighi ezi, a ga-akwụ ụgwọ nlezianya anya na profaịlụ a na njikọ ezighi ezi na ezighi ezi n'etiti mmegharị abụọ ahụ.
Ihe odide kachasị mkpa n'ime otu ahụ bụ ezinụlọ Zhang si Shijiazhuang, na mpaghara Hebei, na Lü Yingchun, nwa agbọghọ a mụrụ na Yantai City, Shandong, na Machị 8, 1975. A mụrụ Zhang Lidong na October 8, 1959 na Shijiazhuang, Hebei. Ọ lụrụ Chen Xiujuan, di na nwunye ahụ mụtara ụmụ atọ: ụmụ nwanyị abụọ, ada nwanyị nke okenye Zhang Fan (1984-2015), amụrụ na October 24, 1984, na ada nwanyị nke obere Zhang Hang, amụrụ na March 1, 1996, na nwa nwoke , Zhang Duo, a mụrụ na September 12, 2001 (Wang 2014).
Okposụkedi enye ama akabade ye ebe esie, emi okodude ke ukperedem ama enyene ima emi ekerede Zhang Qiaolian, Chen Xiujuan ama enyene ufọn ke edinam mme n̄kpọ eke spirit. Ọ bụ otu n'ime Atọ Mgbapụta Atọ ahụ Kraịst, ma ọ bụ Mentuhui (门徒 会), "Association of Disciples," òtù okpukpe ọhụrụ guzobere na Ji Sanbao (1940-1997) na Shanxi na 1989. Ji, onye bụ onye na-ekwusa maka ụka nke ndị Pentikọstal nke a maara dịka Chọọchị nke Ezi-ụka, gosipụtara onwe ya dịka "ngọngọ Chineke" ("shen de tishen, 神 的 替身) na etiti nke mgbapụta nke atọ (Dunn 2015a: 35-39).
Lü Yingchun nwere ọchịchọ ime mmụọ site na nwata. Dika o mechara kwuo na ikpe ahu:
M tolitere mara na abụ m "Chineke n'onwe Ya." Na 1998, agụrụ m okwu ahụ "ọkpara" n'ime akwụkwọ banyere "Chineke Pụrụ Ime Ihe Nile." Ekwenyesiri m ike na abụ m 'ọkpara' m. (...) N'ikpeazụ, achọpụtara m na abụ m 'Chineke n'onwe Ya' (The Akwụkwọ akụkọ Beijing 2014).
"Nwa eburu uzọ mụọ" bụ aha e ji mee ihe n'Agba Ọhụụ maka Jizọs Kraịst (lee Ndị Hibru 1: 6; Mkpughe 1: 5). Malite na 2000s mbụ, Lü Yingchun duziri otu ìgwè ọmụmụ na Zhaoyuan. Ọ na-agbasakwa ihe ndị ọ na-ekwu site na Intanet.
Zhang Fan kwetakwara na na 2007 “ọ nara akwụkwọ nke 'Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile' n'ọnụ ụzọ anyị" wee hụ na ọ na-eme ka mmadụ kwenye "Akwụkwọ akụkọ Beijing 2014). N'ajụjụ ọnụ, ọ sịrị na a kpọrọ akwụkwọ ahụ Ọrụ Chineke zoro ezo (神 隐秘 的 做功). O nwere ike ịbụ na e mebiri ma ọ bụ ṅomie ụdị nke Ọrụ Chineke zoro ezo (神 隐秘 的 作工) nke Nzukọ nke Chineke Pụrụ Ime Ihe Nile bipụtara, ọ gwụla ma ọ bụ naanị na o dehiere aha ahụ. O wee zụlite mmasị na Chọọchị nke Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile, mana ọ dịghị mgbe ọ jisiri ike kpọtụrụ nzukọ ahụ. "Ọ dịtụbeghị mgbe mụ na Chọọchị Chineke Pụrụ Ime Ihe Nile na-akpakọrịta, n'ihi na ha zoro ezo ma enweghị m ike ịchọta ha," ka o mesịrị kwuo (Phoenix Satellite TV 2014).
Zhang Fan weputara mgbe o malitere iso Lü Yingchun na Intanet, ma huta azịza ya nye ndị na-akatọ ya "egwu" (Akwụkwọ akụkọ Beijing 2014). Mgbe ahụ, ọ gara Zhaoyuan ka ọ nụ ozi ọma Lü. N'enweghi ike banyere Lü, n'oge okpomọkụ nke 2009, ọ gbanwere nne ya Chen Xiujuan na, site n'aka ya, ezinụlọ ya dum, gụnyere nna ya Zhang Lidong, nwanne ya nwaanyị Zhang Hang, na nwanne ya nwoke Zhang Duo dị afọ asatọ. N'ikpeazụ, ezinụlọ Zhang nile kwagara Zhaoyuan, bụ ebe ha gbaziri ụlọ abụọ. Otu akụkọ na-elekọta ụlọ ahịa ụlọ ahịa na ndị ọzọ na nzukọ okpukpe.
Tupu ịkwaga Zhaoyuan, mgbe e kwusịrị ya na 2002 dị ka nwa akwụkwọ na ụlọ ọrụ Beijing Broadcasting Institute (nke aha ya na 2004 University of Communication University nke China), ebe ọ ga-agụsị akwụkwọ na 2008, Zhang Fan gụrụ akwụkwọ a kpọrọ Olu asaa nke ụda olu (七 雷 发声). Na Zhaoyuan, ọ chọpụtara na akwụkwọ ahụ, ma eleghị anya Lü Yingchun agụwokwa, otu di na nwunye si Baotou, Inner Mongolia: Li Youwang na Fan Bin dere ya. N'oge ahụ, Li na Fan nọ n'ụlọ mkpọrọ. Zhang Fan gbaziri 50,000 RMB site na nne ya wee zipu ha na Baotou nke mere, mgbe a tọhapụrụ ha n'ụlọ mkpọrọ, Li na Fan nwere ike ịga Zhaoyuan ma nọrọ n'ụlọ Zhang. Li na Fan "ka a kpọrọ 'ndị akaebe abụọ' [si Mkpughe 11: 3-12] na Lü Yingchun na Zhang Fan ka a kpọrọ 'ụmụ ọkpara' "site na ìgwè ndị nọ na oge ahụ bụ mmadụ iri abụọ na iri atọ (Xiao na Zhang 2014). Fan Longfeng ghọkwara akụkụ nke ụlọ dị n'ime ya, na 2010 Lü Yingchun malitere ibi na Zhang Fan.
Ndusụk owo ẹdọhọ ke ikọ emi ẹtịn̄de ẹban̄a "uyo uyokọn̄ itiaba" ke uwụtn̄kpọ emi ẹdiọn̄ọde Mkpughe 10: 1-7 nwere ike igosi njikọ na Chọọchị nke Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile, mana nke a abụghị n'ezie otu ndị nwere mmasị na Onye Kraịst Akwụkwọ Mkpughe na ihe nnọchianya ya, ọ bụghịkwa akwụkwọ ahụ ma ọ bụ ndị dere ya ka a kpọtụrụ aha na nke ọ bụla n'ime ọtụtụ akwụkwọ akụkọ na saịtị Weebụ. O yiri ka ọ dị mma ịchọta na ha ejiri ọrụ ndị ọzọ nwere onwe ha rụọ ọrụ.
Ihe ndị mere ka a malite igbu ọchụ ahụ jọgburu onwe ya malitere na 2011 mgbe Zhang Fan kpọpụtara Li Youwang "mmụọ ọjọọ" (邪灵), ya na nwunye ya hapụrụ ìgwè ahụ na Zhaoyuan wee kwaga Dongyin, Shandong. A na - akpọ Fan Longfeng dịka "mmụọ ọjọọ" (邪灵) ma chụpụ ya (Xiao na Zhang 2014). Di na nwunye di na nwunye di na nwunye na Lhang Yuan na ndi di na Lhang Yingchun nwere onwe ha igosi nwayo na ha abughi ndi abia abuo nke akwukwo Mkpughe na Chineke, obu ezie na nkwuputa nke ndi nta ha nwere ike abia na May. 2014.
Na May 20, 2014, ha chọtakwara Chen Xiujuan, nne Zhang Fan, dịka "mmụọ ọjọọ" (Ùnu) ma chụpụ ya na otu ụlọ. Mgbe ahụ, ha gwara Zhang Lidong, bụ Zhang Fan nna, na alụmdi na nwunye ya na Chen Xiujuan agwụla na ọ nwere ike "ịkpọ Zhang Qiaolian onye ọhụụ ya ka ha nwee ike ibikọ ọnụ." Ugbu a, "ha bụ di na nwunye kama Chen Xiujuan]. Lü nyere ha aha ime mmụọ ọhụrụ. [Zhang Lidong] a kpọrọ Adam na Zhang Qiaolian, Iv "(Akwụkwọ akụkọ Beijing 2014). Zhang Qiaolian, onye na-anọghị n'okpukpe nke mbụ, kwupụtara okwukwe ya na Lü Yingchun na Zhang Fan dị ka Chineke Pụrụ Ime Ihe Nile, ma bụrụ onye a nabatara dịka onye so n'ìgwè ahụ.
Na May 28, 2014, otu n'ime igbu ọchụ kachasị njọ na akụkọ ihe mere eme nke okpukpe ọhụrụ bụ eme na McDonald diner na Zhaoyuan, na Shandong nke China [Image na nri]. Mmadụ isii "ndị ozi ala ọzọ" (Zhang Lidong, ụmụ ya ndị inyom Zhang Fan na Zhang Hang, nwa ya Zhang Duo, onye hụrụ ya n'anya Zhang Qiaolian, na Lü Yingchun) batara n'ụlọ nri ahụ na-ekwusara okpukpe ha ma gwa ndị ahịa ka ha hapụ nọmba ekwentị ha maka kọntaktị ndị ọzọ. Wu Shuoyan (1977-2014), onye na-ere ahịa ahịa na-arụ ọrụ na ụlọ ahịa akwa dị nso, jụrụ ịnye nọmba ya. Akpọrọ ya "mmụọ ọjọọ" (Ùnu) ma gbuo ya na mkpịsị aka (Dunn 2015b, 204). Ewezuga Zhang Duo dị afọ iri na atọ, e jidere mmadụ niile, ụlọikpe ndị dị n'etiti Yantai gbara akwụkwọ na August 21, 2014. Na October 11, 2014, Zhang Lidong na Zhang Fan mara ọnwụ. A tụrụ Lü Yingchun mkpọrọ n'ụlọ mkpọrọ. A mara Zhang Hang mkpọrọ afọ iri na Zhang Qiaolian ruo afọ asaa. Na February 2, 2015, Zhang Lidong na Zhang Fan gburu.
N'oge igbu ọchụ, ọchịchị gọọmenti China nọ na-eme mkpọsa iji kpochapụ Chọọchị nke Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile, ma ọ bụ Eastern Lightning, òtù okpukpe ọhụrụ a mụrụ na China na 1991. Chọọchị nke Chineke Onye Pụrụ Ime Ihe Nile (onye isi nchịkwa na ọnụ na-ekwu maka Chineke Pụrụ Ime Ihe Nile) bu Zhao Weishan (bn 1951). Ndi otu ahu na-akuzi na Jisos Kraist alaghachila n'uwa dika Chineke nke puru ime ihe nile. Ọ bụ ezie na njem ahụ ekwughị aha ya ma ọ bụ nkọwa ọ bụla ọ bụla, ma dọọ aka ná ntị na ihe ọmụma ọ bụla sitere na isi mmalite nwere ike ịbụ ihe ọjọọ, ọtụtụ ndị ọkà mmụta kwenyere na ọ na-akpọ Chineke Pụrụ Ime Ihe Nile na nwanyị China, Yang Xiangbin (bn 1973) (Dunn 2015a, 2015b) . Maka ọtụtụ ihe kpatara ya, ya na Falun Gong, Nzukọ nke Chineke Pụrụ Ime Ihe Nile bịara tinye ndị ọchịchị China aka dị mkpa xie jiao (邪教) (Dunn 2015b: 21-23), okwu a na-asụgharịkarị dịka "òtù nzuzo ọjọọ," ma ọ bụ nke e ji mee ihe na China kemgbe oge etiti Ming na ihe "nkụzi heterodox" ma ọ bụ "òtù okpukpe ndị omempụ" (ter Zoo 1992).
Ihe ndekọ sitere na telivishọn na June 16, 2014, bụ ebe ndị isi oche nke Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Mgbochi na Ịgwọ Ndị Cults (nke a na-akpọkwa Central 610 Office) kwurịtara Chọọchị nke Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile. Ha na-atụ aro ka ha "jidesie ihe omume nke 'May 28 McDonald's Murder' ike n'otu aka iji kpughee omume mmeghachi omume, aghụghọ aghụghọ na egwu dị egwu nke òtù nzuzo ahụ," na "ịkwalite ọrụ ndị ọzọ" nke okwu nduhie.
Ozugbo o gbusịrị Wu Shuoyan, ndị uweojii na ndị mgbasa ozi China na-ekwu ngwa ngwa na-egbu egbu na Chọọchị nke Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile, a na-ekwukwa ebubo a site na mgbasaozi ụwa. Dị ka ihe akaebe maka ebubo, ndị ọrụ mgbasa ozi China kwuru na, otu ụbọchị mgbe ọ nwụsịrị, ndị uweojii kwuru na ha achọtala ihe gbasara Chọọchị nke Chineke Pụrụ Ime Ihe Nile n'ụlọ onye isi okwu ahụ, Zhang Lidong (1959-2015) (Chen 2014), gụnyere akwụkwọ ahụ Akwụkwọ mpịakọta ahụ Nke Nwa Atụrụ ahụ meghere (Phoenix Satellite TV 2014). Mgbe ụbọchị abụọ gasịrị, Zhang Lidong pụtara na CCTV, telivishọn nke China. O kwuru na ya enweghi ike na o gburu Wu maka na obu "ojo ojoo" (邪灵). N'ịjụ ihe okpukpe ya bụ, Zhang zara, sị: "Chineke Pụrụ Ime Ihe Nile" (全能 神) (CCTV 2014). [Image na nri]
Ihe akaebe a gosipụtara njikọ dị n'etiti igbu ọchụ na Chọọchị nke Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile. Nnyocha e leziri anya wee tụọ nwere ike iduga n'ụzọ dị iche. Ndị ọkà mmụta na gọọmentị n’onwe ha kwenyere na ndị otu nọ na narị otu narị puku, na kesara ọtụtụ nde akwụkwọ, ụfọdụ n’ime ha hapụrụ ọbụna “n’ebe ọha na eze dị ka ọdụ ụgbọ oloko maka ndị na-agafe agafe ịchọpụta” (Dunn 2015b: 151). Ihe onwunwe ya, ya mere, anaghị egosi na mmadụ bụ onye otu ụka. Ọzọkwa, Zhang Lidong na ndị ọzọ so n'ìgwè ahụ na-ejikarị okwu ahụ bụ "mmụọ ọjọọ" (恶灵), nke na-apụtaghị n'asụsụ na akwụkwọ nke Chọọchị nke Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile, dịka "mmụọ ọjọọ" (邪) . Mgbe theka nke Chukwu Pụrụ Ime Ihe Niile na-eji okwu ahụ eme ihe, enwere iwu ndị akọwapụtara maka ịmata ma mmụọ ọjọọ ọ nwere mmadụ (邪灵). Iwu ndị a ekwekọghị n'eziokwu bụ na ekwuputara onye gburu ọchụ, Wu Shuoyan "mmụọ ọjọọ" (）） dabere naanị na ọ jụrụ ịnye nọmba ekwentị ya.
Ihe ndi ozo mere n'eme ka o doo anya na ndi otu Church nke Pụrụ Ime Ihe Nile na Chineke na Lü Yingchun - Zhang Fan bu otu. Ihe omuma a kwadoro nkwuchi nke onye mmụta Australia nke Emily Dunn na o nweghi onye n'ime ndi banyere McDonald ma buru onye kpatara mpụ ahụ, n'oge a na-egbu mmadụ, onye òtù Chọọchị nke Pụrụ Ime Ihe Nile, kama ọ bụ ndị ọzọ , otu onwe (Dunn 2015b, 204).
Dị ka ọ dị n'okpukpe ọhụrụ ndị ọzọ nke China, nkwenkwe bụ isi nke ìgwè ahụ bụ ọrụ mesa nke duo Lü Yingchun - Zhang Fan. Ugboro zoro aka na Akwụkwọ Mkpughe ekwu na oge apocalyptic na-abịa, na njedebe ikpeazụ n'etiti ezi na ihe ọjọọ. Ndị ga-anabata ọrụ nke ụmụ agbọghọ abụọ ahụ, "anụ ahụ abụọ na-ekere otu mkpụrụ obi" (Akwụkwọ akụkọ Beijing 2014), a ga-azọpụta. Na anyị bi na mgbe ikpeazụ, Lü Yingchun kọwara, kwenyesiri ike na taa ndị mmadụ ga-adị mfe ma bụrụ n'amaghị ama ndị ọrụ "Setan" mgbe ha na-aghọtaghị ọnọdụ ahụ ma ghara iguzo n'akụkụ "Chineke". Ozugbo nke ahụ mere, “ekwensu” ga-anọkwu mwakpo karịa (魔鬼) n'oge agha n'etiti mmụọ abụọ (Akwụkwọ akụkọ Beijing 2014).
The Lü Yingchun - otu Zhang Fan gara n'ihu karịa ịkọ amụma oge ikpeazụ na-abịaru nso na ịhọpụta onwe ya dịka ụzọ pụrụ iche maka nzọpụta, atụmatụ amaghị nke ụfọdụ òtù okpukpe ọhụrụ na-agbanwe agbanwe. Ọnọdụ abụọ ọzọ ọ chere dị oké mkpa iji mee ka ìgwè ahụ gaa na ihe omume ndị ga-ekpebi njedebe ya. Nke mbụ, otu ahụ jikọrọ aka na theka nke Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile site n'ikwu na ụka ahụ bụ "adịgboroja" na ya onwe ya ịbụ onye ziri ezi na nke omume. Na ikpe, Lü Yingchun kọwara n'ụzọ doro anya:
Ala a kpọrọ 'Church of God Almighty' Zhao Weishan dị ka a xie jiao, anyị na-akpọkwa ha 'ajọ mmụọ' (邪灵). Naanị Zhang Fan na m, 'ụmụ mbụ,' nwere ike ịnọchite anya 'Chọọchị nke Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile.' Zhang Fan na m bụ ọnụ nkwupụta pụrụ iche maka ezigbo 'Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile.' Gọọmentị na-agbadata Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile na Zhao Weishan kweere, ọ bụghị 'Chineke Nke Pụrụ Ime Ihe Niile' anyị kwuru. Ha bụ adịgboroja 'Chineke Pụrụ Ime Ihe Nile,' ebe anyị bụ n'ezie 'Chineke Pụrụ Ime Ihe Nile' "(Akwụkwọ akụkọ Beijing 2014).
O nwedịrị ike ịbụ na Lü Yingchun na-ekwupụta nkụda mmụọ maka ọnọdụ steeti ahụ na Chọọchị nke Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile karịa Lü Yingchun - Zhang Fan ma na-akpọ ọkwa dị elu nke mkpochapụ gọọmentị ga-eweta.
N'agbanyeghị ebumnuche Lü Yingchun n'ezie, enwere ike ịrụ ụka na ọ ga-abụrịrị ihe amamihe dị na ya iji mesie mmekọrịta ọ bụla na nzukọ a machibidoro iwu nke Zhao Weishan n'oge ikpe ahụ, nyere ụlọ ikpe ndị China asị na Chọọchị ahụ. Usoro a ga-ekwe ka ndị na-azara ọnụ ha kwuo na ha enweghị oke ọrụ ha, ebe ọ bụ na evilka "ọjọ" nke Chukwu Pụrụ Ime Ihe jikwa ya. Nkwuputa nke ibu ọrụ nwere ike ime ka ohere nke ịgbanahụ ntaramahụhụ ọnwụ maka mpụ ha kacha njọ, igbu ọchụ dịkwuo mma. Mgbe okwu Lü Yingchun kwuru, e mechiri usoro nchebe a.
Ọnọdụ nke abụọ nke òtù Lü Yingchun - Zhang Fan chere na ọ bụ ọrụ maka ịmanye ụkpụrụ omume, ọ bụghị naanị n'ime kamakwa n'èzí ma ọ bụghị naanị n'ụzọ ihe atụ kamakwa n'ụzọ anụ ahụ. Na ikpe, Zhang Fan kwuru na ọ bụ "Chineke n'onwe ya" yana ikike "igbu ndị mmụọ ọjọọ":
Ruo ugbu a, naanị nna m, nwa m nwoke nke m tọrọ, nwanne m nwanyị nke nta, Lü Yingchun, Zhang Qiaolian na m bụ ndị na-akwado ezi 'Chineke Nke Pụrụ Ime Ihe Niile.' Na 2010, abụ m 'ọkpara' nke 'Chineke Nke Pụrụ Ime Ihe Niile.' Enwere m 'Chineke n'onwe ya' n'ihi na m nwetara ikike site n'eluigwe ka m gbuo ndị mmụọ ọjọọ (Igbo) nke a. "N'ikwu okwu banyere 'Chineke n'onwe ya,' ya bụ, Abụ m Chineke na ihe. Lü Yingchun bụ Chineke (Akwụkwọ akụkọ Beijing 2014). [Image na nri]
Nkwupụta a buliri ikike nke òtù Lü Yingchun - Zhang Fan karịa steeti site na ịzọrọ ikike onwe ha iji ike na-egbu egbu, nkwupụta ntọala nke ikike steeti pụrụ iche. Nkwupụta njikọta nke njikwa naanị maka nzọpụta ime mmụọ na ikike zuru oke iji kwado usoro ahụ n'ụzọ ọ bụla dị mkpa, n'ime na mpụga, setịpụrụ ụzọ maka esemokwu, yana ụzọ nke mkparịta ụka weghaara ma mechie.
Nkwupụta ikpe na-ezighị ezi nke ọha mmadụ bụ ihe a na-ahụkarị n'etiti mmegharị okpukpe ọhụrụ dị ka nkewapụ site na ọha mmadụ na mkpesa ihe atụ. Ihe dị iche na Lü Yingchun - ndị otu Zhang Fan bụ nkwanye ugwu dị iche iche nke kwekọrọ na nkwenkwe nkuzi ma mee ngwa ngwa. N'ezie, ìgwè ahụ malitere dị ka otu ìgwè ọmụmụ nke akwụkwọ dị iche iche, gụnyere Olu asaa nke ụda olu. Otú ọ dị, nhazi a gbanwere ngwa ngwa. N'ụbọchị ndị na-eduga na igbu ọchụ nke McDonald, naanị omume ya gụnyere nkwalite ozi ọma nke ndị ozi ala ọzọ nke okwukwe na ịchụpụ "mmụọ ọjọọ" (邪灵). Omume nke ikpeazụ a nwere ọdịnala na okpukpe Chinese, ma Lü Yingchun na Zhang Fan kwenyesiri ike ka ha kpọọ ya "ndị mmụọ ọjọọ" (ndị na-asụ). A gwaghị ha na ha ga-ahapụ: o doro anya na e nwere ememe ndị a na-eji eme ihe ike.
Otu ihe atụ bụ ihe mgbochi nke nne Zhang Fan, Chen Xiujuan, si n'ụlọ Zhang, na ndị otu. Ọ bụ ezie na mmadụ nwere ike ikwubi na mkpali ahụ bụ ọchịchọ iji kwụghachi Zhang Fan nna Zhang Lidong, onye na-akwado ntụkwasị obi abụọ "Chi" ahụ, site n'ikwe ka ya na onye ọ hụrụ n'anya, Zhang Qiaolian, nọrọ karịa nwunye ya, A na-eme ka a chụpụ Chen Xijuan ka ọ bụrụ ihe ngosi nke mbara igwe.
Ihe nkiri ahụ malitere ime na ụbọchị ndị na-amachibido iwu ahụ mgbe Lü Yingchun na Zhang Fan kwupụtara na ha 'ga-ahapụ Ụwa n'oge na-adịghị anya' ma laghachi n'eluigwe. Dika olile anya a na-etolite, otú a ka Zhang Fan si kwenye na nne ya "bu eze nke ndi ojo ojo" (恶灵 之 王).
'Mo ojo ojo' (邪灵) no na aru ayi. M ga-egbu nne m mgbe m zutere ya. Iwe were m mgbe m chọpụtara na nne m bụ 'mmụọ ọjọọ' (ndị na-emeghe) ma chọọ ya ọnwụ jọgburu onwe ya.
Ọ bụ ezie na Zhang Fan enweghị ike ime ihe ike megide nne ya, o tinyere aka na ime ihe ike. "Okwu ndị dịka 'igbu egbu oke, igbu egbugbu, igbu anụmanụ' e dere na mgbidi dị n'ụlọ m. M dere okwu ndị ahụ, "Zhang Fan chetara (Akwụkwọ akụkọ Beijing 2014).
Ime ihe ike na-eme n'oge na-adịghị anya wee ghọọ ime ihe ike anụ ahụ ma buru ụzọ chebe anụ ụlọ anụ ụlọ, aha ya bụ Luyi. Lü Yingchun
choputara Chen Xujuan onu ogugu nke nkita, nke Chen Xiujuan welitere, ma ugbu a abia ihe ozo nke 'mo-ojo' (恶 sile), onye nnochi nke Chen Xijuan. [...] Lü Yingchun kwuru na nkịta ahụ wee tie mkpu, sị, 'Chen Xiujuan, achọpụtawo m gị!' [...]. N'elu 'demon' (恶gba), ayi kwesiri igbatu ya ma obu gbue ya ozugbo (Xiao na Zhang 2014).
Ihe merenụ banyere nkịta nwere ike iyi obere ihe, ma Zhang Lidong tinyere ya pasent dị ukwuu nke nkwupụta ya n'oge ikpe nke otu ụbọchị ebe ọ nọ na-eche na ọ ga-ekwe omume n'ezie ịnwụ ọnwụ. Kpọmkwem otu ụbọchị tupu igbu ọchụ McDonald, Zhang Fan chere na ihe dị oké njọ banyere nkịta ahụ.
Zhang Fan, kọọrọ nna ya, chọtara Luyi n'okpuru tebụl kọfị ma buru ya n'èzí site ọdụ ya. Ọ tụbara nkịta ahụ n'elu ala nke steepụ dị n'èzí ụzọ, Luyi enweghị ike ịgba ọsọ mgbe nke ahụ gasịrị, kama ọ tụgharịrị ya. Zhang Fan kpoo nkịta ahụ ma mebie ya. Nkịta ahụ kwụsịrị ịkwụsị mgbe ọ na-eti ihe, ma Zhang Fan kwuru, sị, 'Anụ ọdụ ya ka na-aga n'ihu.' Anọ m na-aga n'ihu na-atụgharị nkịta ahụ n'isi ya. Ọ na-ama jijiji mgbe obere oge na-agba ụkwụ, echekwara m na ọ nwụọla. Enwere m ọdụ ya dọba ya ma tụba ya n'ime ụlọ mpempe akwụkwọ ahụ n'azụ ụlọ (Akwụkwọ akụkọ Beijing 2014).
Zhang Fan chere na igbu egbugbu nke nkịta, bụ nke na-eje ozi dị ka ihe nnọchianya nke nne ya, bụ ihe omume nke okpukpe, nkwenye nke ọnọdụ Chineke:
Na 26th karịsịa, na mgbede nke e gburu nkịta ahụ, m maara ọbụna na mụ na Lü bụ 'Chineke n'onwe ya.' Site na mgbede ahụ gaa n'ihu, enwetara m ikike ka ukwuu site n'eluigwe ma nwee obi ụtọ dị ukwuu. Enwere m mmetụta na abụ m Chineke otu mgbe m dị afọ iri, ma nke ahụ bụ nanị echiche nke na-egbu m n'isi ruo nwa oge, echefuru m banyere ya mgbe nke ahụ gasịrị (Akwụkwọ akụkọ Beijing 2014).
Ọganihu a na-emewanye nke a na-eme n'okpukpe mere ka ọ bụrụ otu ụbọchị mgbe ọ nwụsịrị na onye uweojii bụ Wu Shuoyan, bụ onye ọbịbịa zuru oke nke ìgwè ahụ zutere mgbe ha banyere McDonald's. Uzo siri ike ya ime ka obula onu ogugu ya puta dika ihe ojo nke ihe di nkpa, nmehie nke a naghugh enwe nchekwube megide "Chineke" n'onwe ya, na ihe iriba ama na agha nke mbu n'etiti "Chineke" na "ndi mo ojo" amalitela.
Nkwupụta nkwupụta Lü Yingchun na-ekpe ikpe mere ka mpụ ahụ pụta ìhè n'ụzọ ime mmụọ dị ka ndị otu ahụ ghọtara: [Foto dị n'akụkụ aka nri]
Zhang Hang jụrụ nwanyị ahụ maka nọmba ekwentị ya, ma ọ jụrụ inye ya ya. Mgbe m matara nke a, achọpụtara m na 'ajọ mmụọ' na-awakpo anyị, na-aṅụkwa anyị, (nke mere ka anyị bụrụ ndị na-adịghị ike na enyemaka.) Anyị abụọ mara na ọ bụ 'ajọ mmụọ' (mmụ), ma jiri okwu ọnụ kọchaa ya. Ọ bụghị nanị na ọ geeghị ntị, ọgụ ya bịara ọbụna karị. Anyị hụrụ ikuku na ahụ ya na-agba ya azụ na tummy. Ọ na-egbu mgbu, mmụọ anyị wee nwee mmetụta na mmụba ya na-etowanye ike, ya mere ọ bụ ọgụ ya. Ahụ m na-esiwanye ike. N'oge agha ahụ, ahụrụ m Zhang Fan ntakịrị ntakịrị, dịka a ga - asị na e nwere 'ajọ mmụọ' (恶灵), na-agbada ya ala. O tiri mkpu ike ya ma o nweghi olu si n'onu ya puta. Enwere m ike ịnụ mkpọtụ na-adịghị ike. Agara m ịdọrọ ya ma tie mkpu na Zhang Hang, na-asị, 'Gini mere i kwenyeghị? Gini mere gi onweghi kwa iga "? Ahụrụ m Zhang Fan na-agba ụkwụ n'isi na ubu ya mgbe nke ahụ gasịrị, m mekwara otu ihe ahụ n'úkwù ya na aka ya. Mgbe 'demon' (恶gba) nagide anyị, Zhang Fan m wee mara nke nta na nwanyị ahụ aghaghị ịnwụ, ma ọ ga - erecha mmadụ niile. N'ihi ya, m gwara Zhang Lidong na ndị ọzọ ka ha tie ya aka ruo mgbe ọ kwụsịrị iku ume. Ma obughi, oburu na o nwere ume, ike nke 'mo ojo' (恶gba oso) imegide ayi agagh adi ike dika oburu na aru ya adighi ike ma o nweghi ike iga. Agwara m ndị ahụ bịara ịkwụsị anyị, 'Onye ọ bụla nke na-egbochi ya ga-anwụ.' Nsogbu n'etiti nwanyị na anyị bụ agha n'etiti mmụọ abụọ, 'Chineke' na 'ekwensu' (魔鬼). Ndị ọzọ enweghị ike ịhụ ya ma ha agaghịkwa aghọta ya. Ndị uweojii apụghị ịghọta ya nke ọma (Akwụkwọ akụkọ Beijing 2014).
Na mbụ, Lü Yingchun na Zhang Fan duru ìgwè ahụ dị ka "ndị ọzụzụ atụrụ." N'akpeazụ ụbọchị nke ìgwè ahụ, Zhang Fan gbara akaebe na "na Chineke Pụrụ Ime Ihe Nile, Lü Yingchun na m nwere ọnọdụ kacha elu. Anyị bụ 'Chineke n'onwe Ya.' Nna m, nwanne m nwanyị nke nta na nwanne, na Zhang Qiaolian bụ 'ndị isi nchụàjà' "(Akwụkwọ akụkọ Beijing 2014).
Ihe abụọ dị mkpa. Nke mbu bụ na ọ dịghị ihe ruru eru maka ndị nchụàjà, ma e wezụga nkwenye na Lü Yingchun na Zhang Fan dịka Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile. Ọbụna nwatakịrị nwoke dị afọ iri na atọ, dịka Zhang Duo, bụ onye ụkọchukwu. Nke abụọ bụ na, na-emegide usoro ọdịnala nke ndị Chinese, na Zhang ezinụlọ, nke bụ n'otu oge okpukpe okpukpe, ọ dịghị ikike nna ochie ma ọ bụ ndị isi na-ekpebi site na afọ. Nna, Zhang Lidong, kwesiri irube isi na nwa nwanyi, bu Zhang Fan, n'enyeghi iwu ya. Chineke kwuru n'ụzọ zuru ezu na-agbanwe usoro omenala, ọ bụ ezie na Zhang Lidong nyere ya ikike site n'aka "Chineke" (na ụmụ ya nile) iji kpọbatara onye ọ hụrụ n'anya n'ụlọ, mgbe a chụpụsịrị nwunye ya ma kpọọ mmụọ ọjọọ.
Lü Yingchun - otu Zhang Fan na-enye ihe omuma banyere ihe omuma banyere ngwangwa ngwangwa na, n'ikpeazụ, nke nbibi nhazi. Ndị otu ahụ dị obere ma dị mkpụmkpụ, yabụ na ọ nweghị usoro nkuzi zuru oke ma ọ bụ ndu na nhazi. Ọtụtụ n'ime njirimara ndị mepụtara (ikpe nkatọ nke ọha mmadụ, amụma amụma na-abịanụ, njedebe nke ikike omume kachasị elu, iwepụ ihe ọjọọ, nduzi na-adọrọ adọrọ, onye ndu ezinụlọ, na esemokwu nke ime obodo) abụghị ihe pụrụ iche maka mmegharị ngagharị iwe nke okpukpe. Ihe dị iche banyere Lü Yingchun - Zhang Fan bụ nchịkọta ya nke otu ihe nkiri a na-ahụ anya, nke metụtara ngwangwa ngwa ngwa, mgbanwe ngwa ngwa site na ihe atụ na ime ihe ike anụ ahụ, na ntinye nke ime ihe ike n'ime ihe nkiri nke ọ wuru. Usoro a mere ka ìgwè ahụ banye n'ọnọdụ na oge ebe ịga n'ihu ghọrọ nke a na-apụghị ịkọwa (Bromley 2002).
N'ime ihe nkiri a, ìgwè ahụ ghọtara na ha na-eme ihe ndekọ akụkọ ihe mere eme nke na-egosi na ọ bụ n'eziokwu, na-ekepụta n'oge. Ọ bụ n'otu oge na-arụ ọrụ na mpaghara nke Chineke (eluigwe) (njirimara na ọrụ nke "ndị ajọ mmụọ" na ịgbaso ntụziaka ndị sitere n'alaeze Chineke n'ógbè ụwa (ịchọpụta ma kpochapụ "mmụọ ọjọọ"). ọ bụ site na ọnọdụ nke ndị nduzi abụọ ahụ dịka ma mpaghara nke Chineke na ndị na-eme ihe nkiri nke mmadụ bụ ndị nwere ike ịrụ ọrụ na mpaghara abụọ n'otu oge ma ọ bụ na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ ya na-emekọrịta ihe. size na flu structure.
Ihe nkiri a na-ahụ anya nke na-eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ bụ ihe na-adịghị mma ma ọ bụghị usoro. O bukwara ibu dị ka steeti nwere ikike zuru oke. Ka o sina dị, omume ndị ndú otu na-eduga n'inwekwu ọtụtụ nhọrọ maka ìgwè ahụ. Ndị ndú ahụ kwuru na ìgwè ha na-akpa àgwà ọma na nke ime mmụọ karịa Chọọchị nke Pụrụ Ime Ihe Niile, bụ nke kpochapụrụ ohere nke ịjụ ibu ọrụ na-ebelata, akụkọ gbasara ndị mmadụ. Ha agafeghị na-ekwu ma na-egosipụta njide omume na-achịkwa ndị òtù (site na usoro nchụpụ) iji kwuo na ha ga-achịkwa ndị na-abụghị ndị òtù. Ha kwukwara na ha nwere ikike iji ike na-eme ka okpukpe ha ka njọ, nke mere ka ha chee na ha ga-achịkwa ikike. Na njedebe, eji otu ike eme ihe n'ụzọ dị egwu, n'ozuzu ọha na eze, na n'ihu ndị na-eguzo na nlele vidiyo. Enwere obere ohere maka nkọwa ndị ọzọ banyere eziokwu nke ikpe ahụ. N'akụkụ a, steeti ga-ekwenyeghachi ikikere nke onwe ya ma kpọọ iwu ndị iwu akwadoro.
Ugbua, n'enweghi ihe puru ime ozo, ihe ndi a choputara ka ndi ochichi ma obu nkwuputa nke ikike na ikike nke Chineke na imegide nduzi Chineke nyere ha. Ha họọrọ nke ikpeazụ. N'ezie, ndị ndú ahụ ebula ụzọ kwuo na ha ga-ahapụ ụwa ozugbo ma laghachi n'eluigwe. Ya mere, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na n'ụlọikpe ndị dị n'etiti Yuroị na Yantai na August 21, 2014, na ụlọ mkpọrọ ndị a gbara ajụjụ ọnụ, ma e wezụga Zhang Hang, nwanne nwanyị nke Zhang Fan, onye kwuputara na ya anoghi n'okpukpe ma nwee obi uto banyere akuko a (Akwụkwọ akụkọ Beijing 2014), ndị ọzọ niile a kwadoro ekwupụtaghị mgbaghara, ma ha emeghị ihe ọ bụla iji zere ịta ntaramahụhụ kachasị njọ. [Foto dị n'aka nri] Nke a gụnyere ọbụna Zhang Lidong, nwoke na-eto eto, bụ onye gbasiri ike, ọ bụ ezie na ọ kwupụtara na ya enweghị ọrụ, maọbụ na ọ na-arụ ọrụ zuru ezu nke "Chi ya," site na oge igbu ọchụ (CCTV 2014). Mkpebi a mechara mee ihe gbasara ọdịmma nke abụọ: steeti ahụ kwusara ya n'ihu ọha na ya nwere ikike n'ụwa a; ndi otu ndi ndu na-etinye onwe ha karia ikike ndi ochichi ichota mmeri n'uwa.
Image #1: McDonald's na Zhaoyuan.
Foto #4: Mpụ ahụ, dịka nke igwefoto onyunyo jide.
Image #5: Ihe ise akwadoro na ikpe.
Bromley, David G. 2002. "Nkwalite Mmegha." Pp. 11-41 na Okpukpe, Okpukpe na Ime Ihe Ike, nke David G. Bromley na J. Gordon Melton dere. New York: Mahadum Cambridge University.
CCTV. 2014. "招远 案 杀人 嫌疑犯 采 aia 全程 - 我 感觉 很好 全能 神教 的 信徒" (Oriental Horizons, Nzukọ nke Ajụjụ Ọnụ na Ịtụle Echiche Mkpuchi Mkpuchi May 28 Zhaoyuan: "Enwere m mmetụta dị mma" - Adherent of the Group nke Chineke Nke puru ime ihe nile). Mee 31, 2014. Nweta site na https://www.youtube.com/watch?v=C4oZGaZky3g na September 10, 2017.
Chen, Lu. 2014. "Ajụjụ ndị a jụrụ banyere igbu ndị na-eme ihe ike na China McDonald's." Oge Epoch, June 1. Nweta site na http://www.theepochtimes.com/n3/709284-questions-raised-over-violent-killing-in-china-McDonald’s na September 10, 2017.
Dunn, Emily. 2015a. "Chọọchị nke Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile / Eastern Lightning." Okpukpe Okpukpe na Ime Mmụọ, February 19. Nweta site na https://wrldrels.org/2016/10/08/church-of-almighty-god/ na September 10, 2017.
Dunn, Emily. 2015b. Ebube si n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ: Heterodoxy na Iso Ụzọ Kraịst na Contemporary China. Leiden: Ọhụụ.
Mmiri na-egbuke egbuke. 2015. "Ihe ngosi zuru oke na ihe ọjọọ nke CCP na-egosi na ọha na eze na-akwado Psychopaths." October 16, 2015. Nweta site na https://easternlightning.wordpress.com/2015/10/16/an-extensive- exposure-to-the-sinister-intention-of-the-evil-ccps-high-profile-public-trial- on-the-psychopaths-2/ na September 10, 2017.
Guo, Baosheng. 2014. "警惕 以" 邪教 "名义 大规政 迫害 基督教" (Na-atụ egwu nke Mkpagbu na Kraịst na Aha nke "Cults"). HRIC (Human Rights in China) Na-ekwu 133 (June 13 – June 26, 2014). Nweta site na http://biweeklyarchive.hrichina.org/article/18374.html na 3 September 2017,
Introvigne, Massimo. 2017. "'Obi ọjọọ igbu, iberibe na-egbu, gbue anụ ọhịa ahụ': Investigging 2014 McDonald's 'Cult Murder'" na Zhaoyuan. ” The Journal of CESNUR 1: 61-73.
"Nancy." 2014. "Mmadụ isii gburu Nwanyị ahụ na McDonald's, May 28th, China." CNN iReport, June 1, Nabatara na http://ireport.cnn.com/docs/DOC-1139281 na 10 September 10.
Phoenix Satellite TV. 2014. “社会 能见度 审判“ 全能 神 ”(Social Watch: Ikpe na“ Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile, ”Ọgọstụ 21. Nweta site na https://www.youtube.com/watch?v=y-MY4XRLv70 na 10 September 2017.
Ter Haar, Baarend J. 1992. Akwụkwọ White Lotus nke akụkọ banyere okpukpe okpukpe Chinese. Leiden: Ọhụụ.
Akwụkwọ akụkọ Beijing. 2014. "山东 招远 血案 被告 自白: 我 就是 神" (Nkwupụta nke Onye Nkwado nke Ọnwụ na Zhaoyuan, Shandong: "Abụ m Chineke n'onwe Ya.") Akwụkwọ akụkọ Beijing, August 23. Jikọtara site na Yang Feng. Nweta site na http://news.sina.com.cn/c/2014-08- 22/123730728266.shtml na 10 September 2017.
Wang, Duruo. 2014. "N'elu News: Onye na-eme ihe ike na-eme ihe ike maka Ọnwụ Mma na McDonald's: Nkwupụta nke Sun Baodong, onyeisi isi nke Ụlọ Nche Nchedo Obodo). Aboluowang.com, June 1. Nweta site na http://www.aboluowang.com/2014/0601/402013.html na 10 September 2017.
Xiao, Hui na Zhang Yongsheng (ya na Han Xuefeng, Zhong Yuhao na Sun Beibe). 2014. "一个" 全能 神教 "家庭 的 发展 史" (History of the Family of "Group of God Almighty"). Akwụkwọ akụkọ Beijing, August 22, 2014. Nweta site na http://www.bjnews.com.cn/inside/2014/08/22/330806.html na 10 September 2017.
Xin, Shuyan. 2014. "Lee 树 言: 中国 当局 何曾 尊重 过 宗教信报 自由" (Ndị ọchịchị China adịghị asọpụrụ nnwere onwe okpukpe). HRIC (Human Rights in China) Akwụkwọ134 (June 27-July 10, 2014). Nweta site na http://www.hrichina.org/chs/zhong-guo-ren-quan-shuang-zhou-kan/xin- shu-yan-zhong-guo-dang-ju-he-ceng-zun-zhong-guo-zong-jiao-xin/ na 10 September 10, 2017.